महंगो हुँदै नेपालको निर्माण क्षेत्र | suryakhabar.com
Home आर्थिक महंगो हुँदै नेपालको निर्माण क्षेत्र
महंगो हुँदै नेपालको निर्माण क्षेत्र
on: ११ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०७:५८ In: आर्थिकTags: No Comments
काठमाडौ । नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो । सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशत र ज्याला ३०.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
यदि ०७१/७२ मा एउटा घर करोडमा बन्थ्यो भने ०७२/७३ मा त्यस्तै घर बनाउन एक करोड १८ लाख रुपैयाँ लागेको छ । नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यभन्दा पनि मजदुरको ज्याला वृद्धिदर उच्च छ । शुक्रबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा भवन बनाउँदा निर्माण सामग्रीमा ७०.५० प्रतिशत र ज्यालामा २९.५० प्रतिशत रकम खर्चिनुपर्छ । निर्माणमा दुई तिहाइभन्दा बढी लागत भार निर्माण सामग्रीको हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मुलुकमा अहिले धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । सहरी विकास, सडक, घररभवन, जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । निर्माण लागत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको हाहाकार नै भयो । भूकम्प लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि व्यापक कालोबजारी पनि भएको थियो । अभाव चर्किएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको थियो । तर, तथ्यांक विभागले बजारमा अनौपचारिक रूपमा बढाइएको भाउ समेटेको छैन ।
समीक्षा वर्षमा सिमेन्ट, गिटी, ढुंगा, मोटो, बालुवा, इँटा, डन्डी, आल्मुनियम, सिसा, बिटुमिन, जिंक सिट, टायल, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरदेखि पेन्टरसम्म सबैको तलबरज्याला उच्चवृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा ‘लेबर कस्ट’ अत्यधिक महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरभन्दा लेबरको ज्याला वृद्धि उच्च देखिएको छ । गत वर्ष इन्जिनियरभन्दा इलेक्ट्रिसियन र पेन्टरको तलब दोब्बर वृद्धि भएको विभागको अध्ययनले देखाउँछ । इन्जिनियरको तलब २२.४ प्रतिशतले बढ्दा इलेक्ट्रिसियनको ४३.३ प्रतिशत र पेन्टरको ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि
उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि उकासिँदै गइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । यसअघि लोडसेडिङका कारण डिजेलबाट उद्योग चलाउनु पथ्र्यो । उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए । मुलुकमा लोडसेडिङ हटेको धेरै भएको छैन । लोडसेडिङ कम भएपछि पछिल्लो समय डिजेलबाट हुने अतिरिक्त लागत कम भएको छ । व्यवसायीका अनुसार मजदुरको ज्याला, कच्चा पदार्थ, ढुवानी शुल्कलगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्रीको मूल्य उछालिएको हो ।
विभागका अनुसार गत आवमा समग्र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि १२.८ प्रतिशत छ । माटोको मूल्य सबैभन्दा बढी ६०.६ प्रतिशतले बढेको छ । बालुवाको मूल्य पनि ५१.६ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा माटो र बालुवा उत्खनन गर्ने स्पष्ट नीति छैन । सरकारले माटो र बालुवा उत्खननमा कडाइ गरेपछि मूल्य पनि बढ्दै गएको हो । अहिले नेपालमा विकास निर्माणमा सबैभन्दा चुनौती माटो र गिटी बालुवाको अभाव छ ।
मडारिन थाल्यो आकाशमा खतरनाक बादल, यस्तो छ कारण, बादलबारे बुझिराखौं !
व्यापारीको अपहरणपछि एक युवकले यसरी गरे आफ्नै प्रेमिकाको हत्या !
ग्यास लिक भई आगलागी हुँदा पाँच घाइते
११ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०७:५८